tsara kalitao Drive Shaft Yoke
Antsoy izahay: 0086-13588175767
Antsoy izahay: 0086-13706517482
Japoney Car Propeller Drive Shaft
Parts Shaft Drive
Joke Shaft Drive
Single Small Universal Coupling
Rack familiana ho an'ny TOYOTA
Drive Shaft CV Assembly ho an'ny TOYOTA
Auto Bearing ho an'ny TOYOTA
Ny sliding fork ny drive shaft dia indrindra ny hahatonga ny totalin'ny halavan'ny drive shaft dia mety ho teleskopika, mba hahazoana antoka fa ny toeran'ny axle fiara sy ny fifindrana dia miova matetika amin'ny toe-javatra tsy misy fitsabahana amin'ny hetsika.
Ampahany mampifandray ny fantsona amin'ny fantsona. Ampifandraiso amin'ny faran'ny fantsona. Misy lavaka ao amin'ny flanges ka azo anaovana bolt mba hampifanakaiky ny flanges roa. Ny flanges dia voaisy tombo-kase amin'ny gaskets. Flanged pipe fittings dia manondro ny fittings mitondra flanges. Mety ho ariana, kofehy na welded. Ny flange (mitambatra) dia ahitana flanges roa, gasket ary bolts sy voanjo maromaro. Ny gasket dia apetraka eo anelanelan'ny flange roa sealing surfaces. Aorian'ny fanamafisana ny voa, ny fanerena manokana eo amin'ny entona gasket dia hikorontana rehefa tonga amin'ny sanda iray, ary ny faritra tsy mitongilana eo amin'ny tampon'ny famehezana dia ho feno, ka ny fifandraisana dia mafy ary tsy mitete. Ny fittings sodina sasany sy ny fitaovana dia manana ny flanges manokana, an'ny fifandraisana flange ihany koa. Ny fifandraisana flange dia fomba fifandraisana manan-danja amin'ny fananganana fantsona. Ny fifandraisana flange dia mora ampiasaina, mahatanty tsindry lehibe. Ao amin'ny fantsona indostrialy, ny fifandraisana flange dia ampiasaina betsaka. Ao an-trano, ny savaivony sodina dia kely, ary ambany tsindry, tsy misy flange fifandraisana hita. Raha ao amin'ny efitranon'ny boiler na toerana famokarana ianao, dia misy fantsona sy fitaovana misy flanged na aiza na aiza. Amin'ny ankapobeny, ny anjara asan'ny flange dia ny manamboatra ny sodina mifanentana amin'ny raikitra sy voaisy tombo-kase.
Misy fenitry ny sodina iraisam-pirenena lehibe roa, dia ny German DIN (anisan'izany ny Firaisana Sovietika teo aloha) izay asehon'ny rafitra flange sodina Eoropeana sy ny flange sodina amerikana ANSI asehon'ny rafitra flange sodina amerikana. Ankoatra izany, misy japoney JIS tube flanges, fa amin'ny petrochemical fitaovana dia matetika ampiasaina ho an'ny asam-panjakana ihany, ary ny fiantraikany iraisam-pirenena dia kely.
teo aloha: Fitaovana amidy tsara indrindra amin'ny orinasa roa - Flange Yoke 41-489 Truck Drive Shaft Parts - Speedway
Manaraka: tsara kalitao PTO Shaft Assembly
Vidin'ny fanoloana baotin'ny fiara
Boot Shaft Constant Velocity
Ny kalitao voalohany, azo antoka
Flange Yoke 41-489 Fiara kamiao mitondra fiara
Jioga faran'ny 26-317 Ampahany Shaft Drive
Fivoriambe fiara mitondra fiara
Faritra fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia, Distrikan'i Xiaoshan, Tanànan'i Hangzhou, Faritanin'i Zhejiang